China otomatiki mvura kunyudza autoclave kudzikisira yezvokudya indasitiri Kugadzira uye Fekitori | Shenlong
Otomatiki emvura kunyudza autoclave kudzikisira kune chikafu indasitiri
Kunyudza mvura retort / autoclave ndeyekuti chigadzirwa chinonyudzwa nemvura. Mhando iyi yekudzosera inokodzera homwe hombe, hombodo dzePP / PE, nezvimwe.
Kunyudza mvura kudzosera / autoclave ndeyekuti chigadzirwa chinonyudzwa nemvura. Mhando iyi yekudzosera inokodzera homwe hombe, hombodo dzePP / PE, nezvimwe.
1. Mvura inogadzirwa isati yadziya-pamusoro mutangi remvura, saka zvigadzirwa zvinogona kupisa nekukurumidza. Uye kugadzira mvura kunogona kudzokororwa, saka kuenderera kugadzirwa kunogona kuchengetedza kunwa kwemhepo nemvura.
2. Kudzora kwedu hakuna njodzi:
Suo redu rekudzorera rakapindirana kuverengera kuvharwa kwemusuwo.
Mutumbi wese wekudzosa unowanikwa mukamuri redu rekutarisa kuti uone kana iwo waya wakanaka.
3. Zvikamu zvedu zvemagetsi ndiNokia uye Schneider kuvimbisa kumhanya kwemuchina wedu.
4. Yakakwana tembiricha uye kumanikidza kutonga kuvimbisa chigadzirwa mhando
Iyo yekudzivirira hari yakakamurwa kuita ekumusoro uye ezasi matanda. Tangi repamusoro rinonyanya kushandiswa kuwana mvura inopisa. Iyo sterilization performance inopedzwa netangi repasi. Kuitira kuti uve nechokwadi chekuti tembiricha yetangi repasi yunifomu, kuvharisa hakuna magumo akafa, iyo inopisa mvura iri muhari inotenderera nekukurumidza uye kutonga kwecomputer kuri nyore.
Kuti zviite nyore, takatora matanho anotevera:
1. Zvinoenderana nezvinodiwa muchigadzirwa, tanga kupisa hari yepamusoro kusvika panenge 0-120 ℃ (inogadziriswa zvinoenderana nemaitiro echigadzirwa), zadza iyo yekudzivirira mbichana nezvose zvinhu uchidziya, vhara musuwo wehari, uye vhura iyo inopindirana mudziyo.
2. Mushure mekupompa mvura yepamusoro yetangi kupinda muhari yekuvhara mbichana kune iyo saji yemvura, iyo yekuparadzira nhanho yemvura inoburitsa 4-20 Majn kune iyo PLC yekudzora system, uye iyo yekupompa mvura system inozovharwa yega kutenderera iyo inopisa mvura muhari.
3. Munguva yekutenderera, kuitira kuti uve nechokwadi chekufananidzwa kwenzvimbo yemvura muhari, matatu-nongedzo akateedzana kubatanidza anogamuchirwa, akabatana ne -108 pombi, uyezve hombe-dhayamita pombi yemvura inoshandiswa kupisa (ichi chinopisa exchanger yemvura inodzivirira kudziya kwakananga muhari) Kana kuchidziya, iyo steam inonongedzera zvakananga zvinhu, ichigadzira zvimwe zvezvinhu zvine tembiricha), uye wozopfuura nepakati masere muhari (mapoinzi masere, akapatsanurwa kuita mapoinzi maviri kumusoro , pasi, kuruboshwe uye kurudyi) kugadzira mvura inopisa yakananga muhari yekudzvinyirira Yekutenderera, vharuvhu yekushandura inoyerera yakarongedzwa pakati pepombi kuita kuti mvura inopisa ifambe neimwe nzira uye isingavhiringidzike kuve nechokwadi chekuti tembiricha iri muhari haina .
4. Kana mvura inopisa ichitenderera, kana dhiramu rekuvhara mbichana rakareba uye chinhambwe pakati penzvimbo imwe neimwe chakareba, kuitira kuti mvura inopisa iyere zvakanyanya, pombi yesimbi isina chinhu inoshandiswa segwara, uye gomba rekubudisira mvura rakabayirwa kune rimwe divi repombi. Iyo yekuyambuka-chikamu chikamu cheiyo quincunx chubhu iri 1.2 nguva iyo muchinjiko-chikamu chikamu chegomba diki). Tichifunga nezve kuramba kwemvura, gomba rehubhu rinotanga riri diki uyezve rakakura, uye mvura inopisa muhari inotenderera kamwe chete nguva dzese.
5. Iyo yekuvhara mbesa inogona kusvika pakatemerwa tembiricha mukati memaminetsi mashoma kana iyo tembiricha yamutswa. Munguva yekudziya, pamwe nekukwira nekudonha kwetembiricha uye shanduko diki pane tembiricha pane iyo nguva dzose tembiricha, iyo firimu firimu inodzora vharuvhu inogadzirisa iyo yekuisa mweya kuti ive nechokwadi chekuti tembiricha haizoshandurwe. Kumhanya. (Iyi firimu remhepo inodzora vharuvhu inoburitsa chiratidzo che4-20mA chazvino kuburikidza netembiricha inosanganisirwa transmitter uye inoipinza muchirongwa chePLC yekusavhiringidzwa kwekuvhara nekuvhura zvigadziriso kudzamara yavhara.) Iyo firimu remhepo inodzora vharuvhu inochinja nekushisa kugadzirisa. 6. Kana kumanikidza kuchichengetwa, iko kumanikidza kunongo chengetedzwa kuburikidza neyakaunganidzwa yekumanikidza yekumanikidza Iko kumanikidza muhari kunogona kuiswa pekutanga, uye iko kumanikidza kunozoerekana kwaburitswa kana iko kumanikidza kwakakwira, uye iko kumanikidzwa kuchizowedzerwa otomatiki kana iko kumanikidza kuri kushoma. Mushure mekunge mabhakitiriya aurayiwa, mvura inopisa muhari inosvinirwa muhari yepamusoro. 7. Iyo sterilization poto inovhura iyo inotonhorera kutenderera pombi kana iyo tembiricha yakadzikiswa, uye ine yakagadzirirwa neyakafashukira vharafu. Kana iyo yekuvhara mbesa ichishandiswa kwenguva yakareba, chikamu chemvura inopisa muhari chinogona kuburitswa kuburikidza nevhavha yekufashukira kuona kuti chigadzirwa muhari chaburitswa munguva pfupi. Kutonhorera kune tembiricha yakatarwa.
Iyo yekudzosera musimboti yakavakirwa yakananga yeutsi jekiseni kupisa mvura iri pamusoro tangi kune pre-set tembiricha pamwe chete nekuenderera kutenderera kwemaitiro emvura uye nekushandisa kwemhepo yakamanikidzwa kana zvichidikanwa, izvi zvinobvumidza kudzikisira iyo yekudzivirira tembiricha pasina chero njodzi yekukuvara. yemudziyo, izvo zvinoguma nepfupi kuita nguva uye nekudaro iri nani chigadzirwa mhando.
Mhepo inopindwa mukati mekutenderera kuti ipise, ichidzivirira tsvina, kuchengetedza simba.
Yakadzvanywa mweya inogona kuiswa panguva yakazara yekugadzirisa kutenderera, inogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa maitiro uye inodzorwa nemagetsi emagetsi ekumanikidza mweya inlet uye kumanikidza kurerukirwa kuverengera preset kumanikidza mukutsiva.
Chiedza chekunyevera chinoratidza kupera kwenyaya yacho, kana yapera. Kuvhura kwemusuwo kunotenderwa kuburitsa. Izvo zvino zvave kugadzirira kutenderera kutsva.
Munguva yese iyi maitiro, iwo mutumbi unotenderera zvinoenderana neyakaisetwa kutenderera kumhanya. (0-12R / M, mutengi anogovera kutenderera kumhanya).
Kubatsira kwemvura kunyudza kudzikisira
kunyudza kwemvura kunodzosera dzinenge dzinogona kugadzirisa ese marudzi emapakeji, kunyanya kune hombe vacuum kurongedza chikafu uye PP bhodhoro. Materu maviri ekunyudza emvura (ane tangi remvura inopisa) anogona kuchengetedza mvura uye chiutsi.
Pashure: Mvura Mvura Rudzi rweCanned Food Sterilization Retort
Zvadaro: Kupisa kutengesa kwekutengesa chikafu retort sterilizer autoclave yehove dzemumagaba